Appinions: द को, के र प्रभाव मार्केटिंग को Martech Zone
केही मार्केटि technology टेक्नोलोजी प्लेटफार्महरू उमेर राम्रो रक्सीको जस्तै उनीहरूले मुद्दालाई अनइन्डि। गर्न जारी राख्छन् कि प्लेग बजारहरूले। Appinions ती मध्ये एक प्लेटफर्म देखिन्छ। जब हामी केहि वर्ष अघि पोष्ट गरेका थियौं, यो राम्रो थोरै प्लेटफर्म हो जसले विषय र व्यक्तिबाट प्रभाव प्रदान गरेको थियो - त्यो समय धेरै उपयोगी थियो। वर्षहरू पछि र यो एक व्यापक मार्केटिंग प्लेटफर्म हो जुन कर्पोरेसनहरूको लागि विशेष रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्दछ विशिष्ट बजारमा उनीहरूले पछ्याउन चाहेको अधिकार प्राप्त गर्न।
पछिल्लो दिन, बिक्री र मार्केटिंग सरल थियो। केवल एक सम्भावित ग्राहकले पत्ता लगाउन सक्ने सूचनाहरू तपाईं द्वारा नियन्त्रण गरिएको थियो - केवल साधारण तपाईंको विज्ञापन (प्रिन्ट इन्टरनेट) मार्फत र त्यसपछि तपाईंको वेबसाइटमा। बिक्री त्यसपछि स्कूप मा, बाँकी जानकारी भर्न, र एक सम्झौता बन्द गर्न सक्दछ। आजकल, त्यो पूर्णतया फ्लिप भयो। भर्खरका तथ्या .्कहरूले त्यो देखाउँदछ %०% खरिदकर्ताहरू हुन्छन् ग्राहकले तपाईंलाई पुग्नुभन्दा अघि.
त्यो %०% एपिनियन्सले भनेको छ अनियन्त्रित मार्केटिंग - ब्रान्डलाई थाहा थिएन कि उनीहरूको सम्भावित ग्राहकहरू के पढ्दैछन्, कहाँ उनीहरू पढ्दै थिए, कसले के भनिरहेको छ, तपाईको ब्रान्डमा लाखौं मतहरू मध्ये कुन फरक परेको छ, आदि अहिलेसम्म! - Appinions ले तपाईंलाई यो अन्तरदृष्टि दिन्छ र तपाईंलाई अनुमति दिन्छ प्रभाव यी सबै नयाँ ग्राहक टच पोइन्टहरू।
कुनै पनि शीर्षकको लागि, एपिनियन्स सतहहरू जसले कसले भन्दैछ, र ती विचारहरूलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। एपिनियन्सले हरेक दिन लाखौं लेखहरू इन्जेट्स गर्दछ, र विश्लेषण गर्दछ को भन्दै छ के बारेमा जो विषयहरू, कर्नेल प्राकृतिक भाषा संसाधन अनुसन्धानको वर्षमा आधारित। डाटा पोइन्टहरू प्रतिक्रिया अनलाइन, अफलाइन, वास्तविक समाचार स्रोतहरू, टेलिभिजन, र सामाजिक मिडिया मार्फत पुग्छ।
एक मार्केटरको रूपमा, तपाईं त्यसपछि डाटाको साथ धेरै महान कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ ती प्रभावकारीहरूमा पुग्न र तपाइँको उत्पादन बारे सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। वा तपाइँ विषय डेटा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ (उदाहरणका लागि के चीजहरू भनेको मानिसहरूले कुरा गरिरहेका छन्) तपाइँको सामग्री मार्केटिंग रणनीति निर्देशित गर्न। वा तपाइँ घटनाको लागि स्पिकरहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईं एक उत्पादन सुरुवात, आदि को सफलता मापन गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्ण प्रभावशाली प्रोफाइल
टैग: appinionsप्रतिस्पर्धी प्रभाव डाटाप्रभावकारी विपणनप्रभावकारी मार्केटिंग प्लेटफर्मइन्फ्लुएन्शल सामग्रीभावनात्मक विश्लेषणविषय ड्यासबोर्ड
यो चाखलाग्दो छ। म यसलाई जाँच गर्छु। म Klout मा तपाईंको विचारहरु संग सहमत छु।
त्यो दृश्य धेरै राम्रो छ!
अगस्ट 7, 2014 मा 11: 43 AM
प्रभाव अनुसन्धान मार्फत सह-लेखन गर्दा मैले प्रभाव विपणन प्लेटफर्महरूको एक धेरैमा अनुसन्धान गरे र प्रयोग गरे: गत बर्ष कसरी ब्रान्ड इन्फ्लुएन्सरहरू सिर्जना गर्ने, प्रबन्ध गर्ने, र नाप्ने भन्ने, र ती सबै पछि म यो कुरामा विश्वस्त छु कि एपिनियन्स एक सब भन्दा व्यापक उद्यम हो। प्लेटफार्महरू उपलब्ध छन्। अत्यधिक सिफारिश गरिएको।
अगस्ट,, २०१72014:२१ अपराह्न
साम - नोट को लागी धेरै धन्यवाद। प्रभाव मार्केटिंगमा पुस्तक पढ्न चाहने मान्छेहरूको लागि - साम book के पुस्तक उठाउन नबिर्सनुहोस्! प्रभाव मार्केटिंग: कसरी सामाजिक मिडिया मार्केटिंग (Que Biz-Tech) मा ब्रान्ड प्रभावकारीहरू सिर्जना गर्ने, प्रबन्ध गर्ने र मापन गर्ने।